ကားမှာပါတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ Safety Lock (3) မြိုး - Latest Myanmar News
ကားမှာပါတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ Safety Lock (3) မြိုး
April 28, 2021 by Latest Myanmar News
ကနြျောတို့လကျရှိ အသုံးပွုနတေဲ့ ကားတှဟော ခတျေမီနညျးပညာသုံး ကားတှဖွေဈပွီး ဟိုးအရငျ ခတျေဟောငျး ကားတှနေဲ့မတူ မျောတျောယာဉျအတှကျရော ကားမောငျးသူအတှကျပါ အန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေး နညျးပညာတှကေို တီထှငျအသုံးပွုနကွေပါပွီ ။
ဒီနတေ့ငျပွပေးခငျြတဲ့ ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock သုံးမြိုးကတော့ ကားမောငျးသူ တယောကျတညျး အတှကျမဟုတျဘဲ ကားမှာလိုကျပါစီးနငျးနိုငျတဲ့ ကားမောငျးသူရဲ့ မိသားစုဝငျ (အဓိက အားဖွငျ့ ကလေးတှေ) တှအေတှကျ အထူးပွုလုပျ ထညျ့သှငျး ထားတဲ့ Safety Lock လေး ၃ မြိုးပါ ။
Child Lock ဆိုတာကတော့ ကားတံခါးကို အတှငျးကနေ ဖှငျ့မရဘဲ အပွငျကနပေဲ ဖှငျ့ရအောငျ လုပျထားတဲ့ Lock လေးတခုပါ ။ ဒီ Lock လေးအကွောငျး မသိတဲ့ သူတျောတျောမြားမြား ၊ ကားရဆေေးရငျး ဖွဈဖွဈ
သနျ့ရှငျးရေး လုပျရငျးဖွဈဖွဈ ဒီ Lock လေး မတျောတဆနှိပျမိလို့ Lock ကသြှားတဲ့အခါမှာ ကားတံခါးကို အတှငျးကနေ ဖှငျ့မရတော့ဘဲ အပွငျကနပေဲ ဖှငျ့ရတော့လို့ ကားဝပျရှော့တှေ သှားပွတာမြိုးကွုံရ တတျပါတယျ ။
Child Lock ဆိုတဲ့ အရာကို ကားမှာ မှ မဟုတျဘဲ နရောတျောတျောမြားမြားမှာ အသုံးပွုကွပါတယျ ။ အဓိက ကတော့ ကလေးသူငယျတှရေဲ့ စူးစမျးစိတျကွောငျ့ မတျောတဆ ထိခိုကျအန်တရာယျတှေ မကွုံရလေ အောငျ
ကာကှယျဖို့အတှကျ တီထှငျဖနျတီးထားတဲ့ အရာတှပေါ ။ကားမောငျးနတေဲ့အခြိနျ ဖွဈဖွဈ ၊ ကားလမျးဘေးမှာ ရပျထားတဲ့ အခြိနျဖွဈဖွဈ ကလေးသူငယျတှေ ကားနောကျခနျးထဲမှာရှိနတေဲ့အခြိနျ ကားတံခါးကို မတျောတဆ ဆှဲဖှငျ့လိုကျမိရငျ ၊
ကားတံခါးပှငျ့သှားပွီး နောကျက ကားတှနေဲ့ တိုကျမိတာ ၊ ကလေးပွုတျကတြာ ၊ ယာဉျမတျောတဆ မှုတှဖွေဈတာ အစရှိတဲ့ အန်တရာယျ အမြိုးမြိုး ကွုံရနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီ Child Lock ဆိုတာလေးကို တီထှငျအသုံးပွုခဲ့ကွတာပါ ။
ဒီ Child Lock ဆိုတာလေးကို 1949 ခုနှဈမှာ Joseph M. Schumann ဆိုတဲ့ လူက စတငျတီထှငျခဲ့တာပါ ။ 1985 ခုနှဈမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ထုတျလုပျတဲ့ ကားတှကေို Child Lock မဖွဈမနေ ထညျ့သှငျးတပျဆငျရမယျ ဆိုတဲ့ ဥပဒထေုတျပွနျပွီး စတငျအသုံးပွုခဲ့ကွတာပါ ။
ဒီ Child Lock လေးအသုံးပွုပုံက ရိုးရှငျးပါတယျ ။ တခြို့ Child Lock တှကေ အပျေါအောကျ တှနျးတငျ တှနျးခြ လို့ရတဲ့ ခလုတျလေးနဲ့ ပွုလုပျထားပွီး ၊ အောကျကို တှနျးခထြားရငျ Child Lock လုပျထားတာ ( အတှငျးကနေ ဖှငျ့မရ အပွငျကဖှငျ့ရသညျ ) ၊
အပျေါပွနျတှနျးတငျရငျ Unlock ပါ ( အတှငျးရော အပွငျကနပေါ ဖှငျ့ရသညျ ) ။ ပုံမှာ လလေ့ာကွညျ့လို့ရပါသညျ ။
တခြို့ကားအမြိုးအစားတှရေဲ့ Child Lock တှကေတော့ ကားသော့နဲ့လှညျ့ပွီး အဖှငျ့အပိတျလုပျရတဲ့ အမြိုးအစား Child Lock တှဖွေဈပွီး Driver ကနေ အဖှငျ့အပိတျ ထိနျးခြိုပျနိုငျတဲ့ Electronic စနဈသုံး Child Lock တှလေညျးရှိပါတယျ ။
ကိုယျက ကားမောငျးသူ တယောကျဖွဈပွီး ၊ ကိုယျ့ကားမှာ ကလေးတှလေိုကျပါစီးနငျးတတျတယျဆိုရငျ ကားမှာရှိတဲ့ Child Lock လေးတှေ အလုပျလုပျမလုပျ စမျးသပျစဈဆေးထားသငျ့ပါတယျ ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကားတံခါး အတှငျးကနေ ဖှငျ့မရဘဲ အပွငျကနပေဲ ဖှငျ့ရတာမြိုးကွုံနတေယျဆိုရငျ ဒါကားမှာပါတဲ့ Child Lock ဆိုတဲ့ Saftey feature လေး တခုဆိုတာ သတိရပေးစလေိုပါတယျ ။
2. Power Window Lock
အခုရှငျးပွခငျြတဲ့ နောကျတဲ့ Safety Lock တမြိုးက Power Window Lock ပါ ၊ ဒီ Power Window Lock ဆိုတာကတော့ ကားမောငျးသူဖကျခွမျးက Power Window ကလှဲလို့ ကနျြတဲ့ တခါးတှေ မှနျအတငျအခြ လုပျမရအောငျ
ထိနျးခြုပျထားတဲ့ Safety Lock လေးတခုပါ ။ ကားမောငျးသူဖကျခွမျးမှာ ရှိတဲ့ မှနျတငျမှနျခြ Main Switch မှာပါပွီး အဲ့ဒီ ခလုတျလေး နှိပျထားလိုကျရငျ ကားမောငျးသူဖကျခွမျးက မှနျတခပျြကလှဲလို့ ကနျြတဲ့တခါးပေါကျတှကေ မှနျတှအေကုနျ အတငျအခြ လုပျမရတော့ပါဘူး ။
သူရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြကတော့ အပျေါက Child Lock လိုပါပဲ ကလေးတှေ ကားထဲမှာ စီးနတေဲ့အခြိနျ မှနျအတငျအခြ ခလုတျတှကေို ကစားတာ ၊ မှနျပိတျထားတဲ့အခြိနျ မှနျတငျမှနျခြ ခလုတျပျေါကို
ရပျမိလို့ မှနျတခါးမတျောတဆ ပှငျ့သှားတာ ၊ မှနျကိုဖှငျ့ပွီး ခေါငျးတို့ လကျတို့ အပွငျကို ထုတျတာ အစရှိတဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ အပွုအမူတှကေို ကာကှယျဖို့တီထှငျဖနျတီးထားတာပါ ။
အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ Child Lock လိုပါပဲ ၊ ကိုယျ့ကားရဲ့ နောကျခနျးထဲမှာကလေးတှေ အမွဲလိုကျပါ စီးနငျးတတျတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီ Power Window Lock လေးတှေ ကောငျးမကောငျး အမွဲစဈဆေးပွီး ၊ ကလေးတှေ အန်တရာယျကငျး ဘေးရှငျးဖို့ ဒီ Safety Feature လေးကို သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ ။
ကားမှနျတငျမှနျခတြှေ Driver Side ကလှဲလို့ ကနျြတဲ့ တံခါးတှေ မှနျတငျမှနျခြ လုပျမရဘူးဆိုရငျ ဒီ Power Window Lock လေးကို သတိရပွီး အပိတျအဖှငျ့လုပျ စဈဆေးကွညျ့သငျ့ပါတယျ ။
3. Shift Lock
Shift Lock ဆိုတာကလညျး ကားအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ Safety Lock လေးတခုပါပဲ ၊ သခြောရှငျးပွရရငျတော့ ကားမောငျးသူတိုငျး နစေ့ဉျအသုံးပွုနပွေီး သတိမမူမိတဲ့ Lock လေးတခုပါပဲ ။ ကားကိုစကျစနှိုးလိုကျတယျ ၊
ကားစကျနိုးသှားတယျဆိုရငျ ရှသှေ့ားဖို့ Gear Position ( P ) ကနေ (D) ကို ထိုးတော့မယျဆို ဘရိတျကို နငျးမယျ ၊ ပွီးရငျ Shift Lever ( ဂီယာတံက ) ဘု လေးကို နှိပျပွီး ထိုးမှ ဂီယာထိုးရပါတယျ ။ ကား Shift Lever က P ( Parking ) မှာရှိနတေဲ့အခြိနျ ဘရိတျမနငျးဘဲ ဂီယာဘုပဲ နှိပျ ဂီယာထိုးကွညျ့ရငျ ဂီယာထိုးမရပါဘူး ။
ဘာကွောငျ့ အဲ့ဒီလို လုပျထားရတာလဲဆိုရငျတော့ အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလို Safety Feature ကွောငျ့ပါပဲ ။ ကားပျေါမှာ ကလေးတယောကျယောကျ ရှိနမေယျ ၊ ကားကလညျး စကျနှိုးထားမယျ ၊ ကားမောငျးသူ ကလညျး အပွငျကိုထှကျနတေဲ့အခြိနျ
ကလေးက ဆော့ကစားပွီး Shift Lever က ဘုကိုနှိပျပွီး Gear Position တှေ လိုကျကစားလိုကျရငျ ကားက ဂီယာဝငျပွီး အကုနျဝငျတိုကျမိ အန်တရာယျ တှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ကား Shift Lever (ဂီယာတံ) ကို P (Praking) နရောကနေ အလှယျတကူ ရှမေ့ရအောငျ Shift Lock Solenoid လေးနဲ့ထိနျးပေးထားပါတယျ ။ Shift Lock Solenoid လေးက ဖှငျ့ပေးမှ ဂီယာတံက P (Parking) နရောကနေ အခွားဂီယာတှကေို ထိုးလို့ရပါတယျ ။
Shift Lock Solenoid လေးကိုတော့ သော့ဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ (IG) အပေါငျး (+) Voltage ရောကျအောငျ လုပျထားပွီး နောကျထပျ လိုအပျတဲ့ အနှုတျစ (-) ကိုတော့ ECU ကနေ ပေးပို့ပါတယျ ။
ECU ကနလေညျး ဒီအတိုငျးပို့မပေးဘဲ Gear Position က (P) မှာရှိရမယျ ၊ နောကျထပျ Brake လညျး နငျးထားရမယျဆိုတဲ့ အခကျြ နှဈခကျြညီမှ ECU ကနေ အနှုတျ Signal ထုတျပေးပွီး Shift Lock Solenoid ကိုဆှဲစကော Shift Lever ( ဂီယာ ) ဘုကိုနှိပျ ဂီယာထိုးရစပေါတယျ ။
ဒါက Shift Lock ဆိုတဲ့ ဂီယာလကျတံ ရှပွေ့ောငျးတဲ့ စနဈပါ ။ Shift Lock စနဈက ဒီလို ထိနျးခြုပျထား တာမို့ သူ့ပုံမှနျအတိုငျးဆို ဘရိတျနငျးမှ ဂီယာလကျတံရှရေ့တာမို့ ဘာအန်တရာယျမှ မရှိပါဘူး ။
ဒါပမေယျ့ တခြို့ခြို့သော ကားတှမှော အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ECU ကနေ လာမယျ့ အနှုတျ (-) Signal ကွိုးကို Ground Direct ခထြားတာတှေ ရှိတတျပါတယျ (ဒါမြိုး Ground တိုကျရိုကျ ခထြားတဲ့ ကားတှေ ကနြျောကိုယျတိုငျ မကွာမကွာတှရေ့ပါတယျ ) ။
ဒီလို Ground တိုကျရိုကျခထြားတဲ့အတှကျ Shift Lock Solenoid က သော့ဖှငျ့တာနဲ့ ဆှဲနပွေီး ဘရိတျနငျးစရာမလိုဘဲ ဂီယာဘုနှိပျ ဂီယာထိုးရနပေါပွီ ။
အဲ့လို့လုပျထားတဲ့ဟာမြိုးနဲ့ ဆော့တတျကစားတတျတဲ့ ကလေးနဲ့သှားတှရေ့ငျ ကားစကျလေးနှိုး (Idle) လေးနဲ့ လုပျထားခြိနျ ၊ ကလေးက ဂီယာလကျကိုငျဘုနှိပျ ဂီယာထိုးလိုကျရငျ ဂီယာဝငျသှားပွီး ပွဿနာ အကွီးကွီး တကျသှားနိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ကလေးတှအေမွဲစီးတတျတဲ့ ကားမောငျးသူတှေ ကားပိုငျရှငျတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ကားမှာရှိတဲ့ Shift Lock စနဈကောငျးလားဆိုတာ ကိုယျတိုငျစဈဆေးကွညျ့သငျ့ပါတယျ ။
ကားကို Gear Position (P) မှာထားပွီး သော့ဖှငျ့ ၊ Brake မနငျးဘဲ ဂီယာလကျကိုငျဘုကို နှိပျပွီး ဂီယာထိုးကွညျ့ပါ ၊ ဂီယာထိုးမရဘူးဆိုရငျ Shift Lock စနဈအသကျဝငျနပွေီး အန်တရာယျကငျးပါတယျ ။
အဲ့ဒီလိုမဟုတျဘဲ ဘရိတျနငျးစရာမလိုဘဲ ဂီယာထိုးရနတေယျဆိုရငျတော့ တခုခုခြို့ယှငျးနပွေီမို့ ကြှမျးကငျြဝပျရှော့တှမှော အမွနျသှားရောကျစဈဆေးရမှာဖွဈပါတယျ ။
Shift Lock Release Button
ဒါကတော့ ဂီယာလကျတံ ရှမေ့ရဖွဈတတျတဲ့အခါ Emergency အနနေဲ့ ဂီယာလကျတံရှရေ့အောငျ လုပျထားတဲ့ ခလုတျလေးပါ ။ ကားမောငျးဖို့ စကျနှိုးပွီး ဂီယာလညျးထိုးရော ဂီယာလကျတံက ရှမေ့ရတော့ဘူး
P ( Parking ) နရောမှာပဲ ရှိနတေယျဆိုရငျ ဒီ Shift Lock Release Button လေးကို Emergency အနနေဲ့ အသုံးပွုပွီး Gear Position တှပွေောငျးလဲရနိုငျပါတယျ ။
ဂီယာသင်ျကတေ P, R, N, D,2စတဲ့ဂဏနျးတှရေဲ့ အပျေါမှာ ဘေးမှာရှိတတျပါတယျ ။ တခြို့အမြိုးအစား ကားတှမှော ဘုလေးတှအေဖွဈရှိနပွေီး ၊ တခြို.ကားတှမှောတော့ သော့တို့ ၊ ၀ကျအူလှညျ့တို့နဲ့ ထိုးမှ ရတဲ့ အခြိုငျ့လေးတှေ ထဲမှာ တညျရှိတတျပါတယျ ။ ပုံမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ ။
1. Brake Switch တှပေကျြတာ ၊
3. Shift Solenoid ပကျြတာ အစရှိသဖွငျ့ အမြိုးမြိုးရှိတတျပါတယျ ။
ကားမောငျးဖို့ စကျနှိုးပွီး စစထှကျဖို့ ကားဂီယာထိုးမရတော့ဘူး ဆိုတဲ့အခြိနျ ဘရိတျနငျး ဒီခလုတျလေးကို ဖိထားပွီး ဂီယာကို D ရှရေ့သလို ( ဒါမှမဟုတျ ) ကားကို တနရောရာမှာ ရပျထားပွီး သော့ဖှငျ့မရ စကျနှိုး မရတော့တဲ့အခြိနျ ကားကိုနရောရှဖေို့ လိုလာတယျဆိုရငျ
ဒီ Shift Lock Release Button လေးကို နှိပျပွီး ကားကို N ( Neutral ) မှာထားပွီး ကားကိုတှနျး ရှလေို့ရပါတယျ ။
ဒါလေးတှကေလညျး ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock လေးနဲ့ ဆကျစပျပွီး သိသငျ့သိထိုကျတဲ့ အရေးကွီး အခကျြလေးတှပေါ ။ ဒီအခကျြလေးတှကေို သိထားခွငျးဖွငျ့ မတျောတဆ ကွုံတှလေ့ာရရငျ ကိုယျတိုငျ ဖွရှေငျးနိုငျပွီး ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးမှာဖွဈပါတယျ။
Credit – Lynn Za Nee PTU
ကားမှာပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Safety Lock (3) မျိုး
ကျနော်တို့လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေဟာ ခေတ်မီနည်းပညာသုံး ကားတွေဖြစ်ပြီး ဟိုးအရင် ခေတ်ဟောင်း ကားတွေနဲ့မတူ မော်တော်ယာဉ်အတွက်ရော ကားမောင်းသူအတွက်ပါ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နည်းပညာတွေကို တီထွင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ ။
ဒီနေ့တင်ပြပေးချင်တဲ့ ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock သုံးမျိုးကတော့ ကားမောင်းသူ တယောက်တည်း အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကားမှာလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်တဲ့ ကားမောင်းသူရဲ့ မိသားစုဝင် (အဓိက အားဖြင့် ကလေးတွေ) တွေအတွက် အထူးပြုလုပ် ထည့်သွင်း ထားတဲ့ Safety Lock လေး ၃ မျိုးပါ ။
Child Lock ဆိုတာကတော့ ကားတံခါးကို အတွင်းကနေ ဖွင့်မရဘဲ အပြင်ကနေပဲ ဖွင့်ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ Lock လေးတခုပါ ။ ဒီ Lock လေးအကြောင်း မသိတဲ့ သူတော်တော်များများ ၊ ကားရေဆေးရင်း ဖြစ်ဖြစ်
သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရင်းဖြစ်ဖြစ် ဒီ Lock လေး မတော်တဆနှိပ်မိလို့ Lock ကျသွားတဲ့အခါမှာ ကားတံခါးကို အတွင်းကနေ ဖွင့်မရတော့ဘဲ အပြင်ကနေပဲ ဖွင့်ရတော့လို့ ကားဝပ်ရှော့တွေ သွားပြတာမျိုးကြုံရ တတ်ပါတယ် ။
Child Lock ဆိုတဲ့ အရာကို ကားမှာ မှ မဟုတ်ဘဲ နေရာတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ။ အဓိက ကတော့ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ စူးစမ်းစိတ်ကြောင့် မတော်တဆ ထိခိုက်အန္တရာယ်တွေ မကြုံရလေ အောင်
ကာကွယ်ဖို့အတွက် တီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေပါ ။ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကားလမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကလေးသူငယ်တွေ ကားနောက်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန် ကားတံခါးကို မတော်တဆ ဆွဲဖွင့်လိုက်မိရင် ၊
ကားတံခါးပွင့်သွားပြီး နောက်က ကားတွေနဲ့ တိုက်မိတာ ၊ ကလေးပြုတ်ကျတာ ၊ ယာဉ်မတော်တဆ မှုတွေဖြစ်တာ အစရှိတဲ့ အန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီ Child Lock ဆိုတာလေးကို တီထွင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ ။
ဒီ Child Lock ဆိုတာလေးကို 1949 ခုနှစ်မှာ Joseph M. Schumann ဆိုတဲ့ လူက စတင်တီထွင်ခဲ့တာပါ ။ 1985 ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတွေကို Child Lock မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ ။
ဒီ Child Lock လေးအသုံးပြုပုံက ရိုးရှင်းပါတယ် ။ တချို့ Child Lock တွေက အပေါ်အောက် တွန်းတင် တွန်းချ လို့ရတဲ့ ခလုတ်လေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ၊ အောက်ကို တွန်းချထားရင် Child Lock လုပ်ထားတာ ( အတွင်းကနေ ဖွင့်မရ အပြင်ကဖွင့်ရသည် ) ၊
အပေါ်ပြန်တွန်းတင်ရင် Unlock ပါ ( အတွင်းရော အပြင်ကနေပါ ဖွင့်ရသည် ) ။ ပုံမှာ လေ့လာကြည့်လို့ရပါသည် ။
တချို့ကားအမျိုးအစားတွေရဲ့ Child Lock တွေကတော့ ကားသော့နဲ့လှည့်ပြီး အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရတဲ့ အမျိုးအစား Child Lock တွေဖြစ်ပြီး Driver ကနေ အဖွင့်အပိတ် ထိန်းချိုပ်နိုင်တဲ့ Electronic စနစ်သုံး Child Lock တွေလည်းရှိပါတယ် ။
ကိုယ်က ကားမောင်းသူ တယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ ကိုယ့်ကားမှာ ကလေးတွေလိုက်ပါစီးနင်းတတ်တယ်ဆိုရင် ကားမှာရှိတဲ့ Child Lock လေးတွေ အလုပ်လုပ်မလုပ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသင့်ပါတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကားတံခါး အတွင်းကနေ ဖွင့်မရဘဲ အပြင်ကနေပဲ ဖွင့်ရတာမျိုးကြုံနေတယ်ဆိုရင် ဒါကားမှာပါတဲ့ Child Lock ဆိုတဲ့ Saftey feature လေး တခုဆိုတာ သတိရပေးစေလိုပါတယ် ။
အခုရှင်းပြချင်တဲ့ နောက်တဲ့ Safety Lock တမျိုးက Power Window Lock ပါ ၊ ဒီ Power Window Lock ဆိုတာကတော့ ကားမောင်းသူဖက်ခြမ်းက Power Window ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ တခါးတွေ မှန်အတင်အချ လုပ်မရအောင်
ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Safety Lock လေးတခုပါ ။ ကားမောင်းသူဖက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ မှန်တင်မှန်ချ Main Switch မှာပါပြီး အဲ့ဒီ ခလုတ်လေး နှိပ်ထားလိုက်ရင် ကားမောင်းသူဖက်ခြမ်းက မှန်တချပ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့တခါးပေါက်တွေက မှန်တွေအကုန် အတင်အချ လုပ်မရတော့ပါဘူး ။
သူရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အပေါ်က Child Lock လိုပါပဲ ကလေးတွေ ကားထဲမှာ စီးနေတဲ့အချိန် မှန်အတင်အချ ခလုတ်တွေကို ကစားတာ ၊ မှန်ပိတ်ထားတဲ့အချိန် မှန်တင်မှန်ချ ခလုတ်ပေါ်ကို
ရပ်မိလို့ မှန်တခါးမတော်တဆ ပွင့်သွားတာ ၊ မှန်ကိုဖွင့်ပြီး ခေါင်းတို့ လက်တို့ အပြင်ကို ထုတ်တာ အစရှိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူတွေကို ကာကွယ်ဖို့တီထွင်ဖန်တီးထားတာပါ ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Child Lock လိုပါပဲ ၊ ကိုယ့်ကားရဲ့ နောက်ခန်းထဲမှာကလေးတွေ အမြဲလိုက်ပါ စီးနင်းတတ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ Power Window Lock လေးတွေ ကောင်းမကောင်း အမြဲစစ်ဆေးပြီး ၊ ကလေးတွေ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းဖို့ ဒီ Safety Feature လေးကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ် ။
ကားမှန်တင်မှန်ချတွေ Driver Side ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ တံခါးတွေ မှန်တင်မှန်ချ လုပ်မရဘူးဆိုရင် ဒီ Power Window Lock လေးကို သတိရပြီး အပိတ်အဖွင့်လုပ် စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ် ။
Shift Lock ဆိုတာကလည်း ကားအတွက် အရေးကြီးတဲ့ Safety Lock လေးတခုပါပဲ ၊ သေချာရှင်းပြရရင်တော့ ကားမောင်းသူတိုင်း နေ့စဉ်အသုံးပြုနေပြီး သတိမမူမိတဲ့ Lock လေးတခုပါပဲ ။ ကားကိုစက်စနှိုးလိုက်တယ် ၊
ကားစက်နိုးသွားတယ်ဆိုရင် ရှေ့သွားဖို့ Gear Position ( P ) ကနေ (D) ကို ထိုးတော့မယ်ဆို ဘရိတ်ကို နင်းမယ် ၊ ပြီးရင် Shift Lever ( ဂီယာတံက ) ဘု လေးကို နှိပ်ပြီး ထိုးမှ ဂီယာထိုးရပါတယ် ။ ကား Shift Lever က P ( Parking ) မှာရှိနေတဲ့အချိန် ဘရိတ်မနင်းဘဲ ဂီယာဘုပဲ နှိပ် ဂီယာထိုးကြည့်ရင် ဂီယာထိုးမရပါဘူး ။
ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလို လုပ်ထားရတာလဲဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို Safety Feature ကြောင့်ပါပဲ ။ ကားပေါ်မှာ ကလေးတယောက်ယောက် ရှိနေမယ် ၊ ကားကလည်း စက်နှိုးထားမယ် ၊ ကားမောင်းသူ ကလည်း အပြင်ကိုထွက်နေတဲ့အချိန်
ကလေးက ဆော့ကစားပြီး Shift Lever က ဘုကိုနှိပ်ပြီး Gear Position တွေ လိုက်ကစားလိုက်ရင် ကားက ဂီယာဝင်ပြီး အကုန်ဝင်တိုက်မိ အန္တရာယ် တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ကား Shift Lever (ဂီယာတံ) ကို P (Praking) နေရာကနေ အလွယ်တကူ ရွှေ့မရအောင် Shift Lock Solenoid လေးနဲ့ထိန်းပေးထားပါတယ် ။ Shift Lock Solenoid လေးက ဖွင့်ပေးမှ ဂီယာတံက P (Parking) နေရာကနေ အခြားဂီယာတွေကို ထိုးလို့ရပါတယ် ။
Shift Lock Solenoid လေးကိုတော့ သော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ (IG) အပေါင်း (+) Voltage ရောက်အောင် လုပ်ထားပြီး နောက်ထပ် လိုအပ်တဲ့ အနှုတ်စ (-) ကိုတော့ ECU ကနေ ပေးပို့ပါတယ် ။
ECU ကနေလည်း ဒီအတိုင်းပို့မပေးဘဲ Gear Position က (P) မှာရှိရမယ် ၊ နောက်ထပ် Brake လည်း နင်းထားရမယ်ဆိုတဲ့ အချက် နှစ်ချက်ညီမှ ECU ကနေ အနှုတ် Signal ထုတ်ပေးပြီး Shift Lock Solenoid ကိုဆွဲစေကာ Shift Lever ( ဂီယာ ) ဘုကိုနှိပ် ဂီယာထိုးရစေပါတယ် ။
ဒါက Shift Lock ဆိုတဲ့ ဂီယာလက်တံ ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ စနစ်ပါ ။ Shift Lock စနစ်က ဒီလို ထိန်းချုပ်ထား တာမို့ သူ့ပုံမှန်အတိုင်းဆို ဘရိတ်နင်းမှ ဂီယာလက်တံရွှေ့ရတာမို့ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် တချို့ချို့သော ကားတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ECU ကနေ လာမယ့် အနှုတ် (-) Signal ကြိုးကို Ground Direct ချထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ် (ဒါမျိုး Ground တိုက်ရိုက် ချထားတဲ့ ကားတွေ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မကြာမကြာတွေ့ရပါတယ် ) ။
ဒီလို Ground တိုက်ရိုက်ချထားတဲ့အတွက် Shift Lock Solenoid က သော့ဖွင့်တာနဲ့ ဆွဲနေပြီး ဘရိတ်နင်းစရာမလိုဘဲ ဂီယာဘုနှိပ် ဂီယာထိုးရနေပါပြီ ။
အဲ့လို့လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ဆော့တတ်ကစားတတ်တဲ့ ကလေးနဲ့သွားတွေ့ရင် ကားစက်လေးနှိုး (Idle) လေးနဲ့ လုပ်ထားချိန် ၊ ကလေးက ဂီယာလက်ကိုင်ဘုနှိပ် ဂီယာထိုးလိုက်ရင် ဂီယာဝင်သွားပြီး ပြဿနာ အကြီးကြီး တက်သွားနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ကလေးတွေအမြဲစီးတတ်တဲ့ ကားမောင်းသူတွေ ကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကားမှာရှိတဲ့ Shift Lock စနစ်ကောင်းလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ် ။
ကားကို Gear Position (P) မှာထားပြီး သော့ဖွင့် ၊ Brake မနင်းဘဲ ဂီယာလက်ကိုင်ဘုကို နှိပ်ပြီး ဂီယာထိုးကြည့်ပါ ၊ ဂီယာထိုးမရဘူးဆိုရင် Shift Lock စနစ်အသက်ဝင်နေပြီး အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် ။
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဘရိတ်နင်းစရာမလိုဘဲ ဂီယာထိုးရနေတယ်ဆိုရင်တော့ တခုခုချို့ယွင်းနေပြီမို့ ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ အမြန်သွားရောက်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ဂီယာလက်တံ ရွှေ့မရဖြစ်တတ်တဲ့အခါ Emergency အနေနဲ့ ဂီယာလက်တံရွှေ့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ခလုတ်လေးပါ ။ ကားမောင်းဖို့ စက်နှိုးပြီး ဂီယာလည်းထိုးရော ဂီယာလက်တံက ရွှေ့မရတော့ဘူး
P ( Parking ) နေရာမှာပဲ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Shift Lock Release Button လေးကို Emergency အနေနဲ့ အသုံးပြုပြီး Gear Position တွေပြောင်းလဲရနိုင်ပါတယ် ။
ဂီယာသင်္ကေတ P, R, N, D,2စတဲ့ဂဏန်းတွေရဲ့ အပေါ်မှာ ဘေးမှာရှိတတ်ပါတယ် ။ တချို့အမျိုးအစား ကားတွေမှာ ဘုလေးတွေအဖြစ်ရှိနေပြီး ၊ တချို.ကားတွေမှာတော့ သော့တို့ ၊ ၀က်အူလှည့်တို့နဲ့ ထိုးမှ ရတဲ့ အချိုင့်လေးတွေ ထဲမှာ တည်ရှိတတ်ပါတယ် ။ ပုံမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
1. Brake Switch တွေပျက်တာ ၊
3. Shift Solenoid ပျက်တာ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ် ။
ကားမောင်းဖို့ စက်နှိုးပြီး စစထွက်ဖို့ ကားဂီယာထိုးမရတော့ဘူး ဆိုတဲ့အချိန် ဘရိတ်နင်း ဒီခလုတ်လေးကို ဖိထားပြီး ဂီယာကို D ရွှေ့ရသလို ( ဒါမှမဟုတ် ) ကားကို တနေရာရာမှာ ရပ်ထားပြီး သော့ဖွင့်မရ စက်နှိုး မရတော့တဲ့အချိန် ကားကိုနေရာရွှေ့ဖို့ လိုလာတယ်ဆိုရင်
ဒီ Shift Lock Release Button လေးကို နှိပ်ပြီး ကားကို N ( Neutral ) မှာထားပြီး ကားကိုတွန်း ရွှေ့လို့ရပါတယ် ။
ဒါလေးတွေကလည်း ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock လေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အရေးကြီး အချက်လေးတွေပါ ။ ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားခြင်းဖြင့် မတော်တဆ ကြုံတွေ့လာရရင် ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
Categories ဗဟုသုတ Tags Safety Lock Post navigation
ဖွောငျ့စကျ ဆှဲစရာမလိုဘဲ ဆံပငျပြော့အောငျ သဘာဝနညျးနဲ့ပေါငျးတငျနညျး
ဝဲနှငျးခူ အစိုအခွောကျ အကငျးမသပေဲ ခဏသာပြောကျပွီး ပွနျဖွဈနလြှေငျ